China Cantilever Ukunyuka formwork mveliso kunye nabathengisi | Lianggong
Ifom form yokukhwela i-cantilever, i-CB-180 kunye ne-CB-240, isetyenziselwa ukuthulula ikhonkrithi enkulu, enje ngamadama, iiperingi, iiankile, ukugcina iindonga, iitonela kunye namagumbi angaphantsi. Uxinzelelo lwecala lekhonkrithi luthwalwa ziankile kunye nodonga ngeentambo zokubopha, ukuze kungabikho ukuqiniswa okufunekayo kwifom form. Ibonakaliswe ngokusebenza kwayo okulula nangokukhawuleza, uhlengahlengiso olubanzi lokuphakama okukodwa, indawo egudileyo yekhonkrithi, kunye noqoqosho kunye nokuqina.
I-cantilever formwork CB-240 ineeyunithi zokuphakamisa kwiindidi ezimbini: uhlobo lwe-brace edibeneyo kunye nohlobo lwe-truss. Uhlobo lweTruss lufaneleke ngakumbi kumatyala anomthwalo onzima wokwakha, ulwakhiwo oluphezulu lwefomathi kunye nomda omncinci wokutyekela.
Umahluko ophambili phakathi kwe-CB-180 kunye ne-CB-240 zezona zibiyeli ziphambili. Ububanzi beqonga eliphambili kwezi nkqubo zimbini zi-180 cm kunye ne-240 cm ngokwahlukeneyo.
● Ukubambelela kwezoqoqosho nangokukhuselekileyo
I-M30 / D20 yokunyuka kweekhowuni ziyilelwe ngokukodwa ukubumbana okusekwe macala kusetyenziswa i-CB180 kulwakhiwo lwamadama, kunye nokuvumela ukuhanjiswa kokuqina okuphezulu kunye nemikhosi yokucheba kwikhonkrithi esandula ukuqiniswa. Ngaphandle kodonga-ngeentambo zokubopha, ikhonkrithi egqityiweyo ilungile.
● Uzinzile kwaye kuyonga iindleko kwimithwalo ephezulu
Ukwahlula isibiyeli esivulekileyo kuvumela indawo enkulu yokwenza iifom ngokusetyenziswa ngokugqibeleleyo komthamo wokuthwala. Oku kukhokelela kwizisombululo zoqoqosho olukhulu kakhulu.
● Ucwangciso olulula nolubhetyebhetye
Nge-CB180 yecala elinye lokunyuka ifom, ukwakheka kwesetyhula kunokudityaniswa ngaphandle kokuya kwinkqubo enkulu yokucwangcisa. Nokuba ukusetyenziswa kwiindonga ezothambekele kunokwenzeka ngaphandle kwamanyathelo awodwa kuba imithwalo eyongezelelweyo yekhonkrithi okanye imikhosi yokuphakamisa inokudluliselwa ngokukhuselekileyo kulwakhiwo.
Ukulayisha okuphezulu kwizibiyeli kuvumela iiyunithi ezinkulu kakhulu zesikafroli. Oku kugcina amanqaku e-anchor amanani afunekayo kunye nokunciphisa amaxesha okunyuka.
● Inkqubo elula yokuhamba nge-crane
Ngonxibelelwano olomeleleyo lwefomwork kunye ne-scaffold yokunyuka, zombini zinokushukunyiswa njengeyunithi enye yokukhwela nge-crane. Kungoko ukugcinwa kwexesha okuxabisekileyo kunokufezekiswa.
● Inkqubo ekhawulezayo yokubetha ngaphandle kwekram
Ngeseti yokubuyisela kwakhona, izinto ezinkulu zeefom zinokubuyiselwa ngokukhawuleza kwaye ubuncinci bomzamo.
● Ukhuselekile ngeqonga lomsebenzi
Amaqonga aqokelelene ngokuqinileyo ngesibiyeli kwaye azakunyuka kunye, ngaphandle kokukroba kodwa anokusebenza ngokukhuselekileyo ngaphandle kwendawo yakho ephezulu.
Egqithileyo Elungiselelweyo Steel Formwork
Okulandelayo: Isikrini sokukhusela kunye nePlatform yokuThula
Inkqubo yohlobo lokutsiba
Ukugcina ukuvalwa kodonga